Ukukhanya kwe-SPC 10.1, ithebhulethi enomdla kakhulu kwezoqoqosho [UHLAZIYO] | Iindaba zeGajethi
Kule veki lixesha lokuba sithethe Ukukhanya kwe-SPC 10.1Ithebhulethi enezoqoqosho kakhulu eya kuthi ngokuqinisekileyo ikumangalise, kangangokuba ucinge ukuthengwa okugqibeleleyo ukuba into oyikhangelayo sisixhobo esilolu hlobo oza kusinikela ekubukeleni iividiyo, ukubukela ii-imeyile, ukudlala imidlalo okanye ukujonga Iindaba zeenethiwekhi zakho zentlalo, ngamanye amagama, ithebhulethi efanelekileyo kubo bonke abantu abangafuni ukuba isixhobo siyilelwe ukuba sisetyenziswe ngokufanelekileyo.
Ukuba le yimeko yakho, ndiyakumema ukuba usijoyine kolu hlaziyo njengoko siza kuthetha ngemveliso abantu abaninzi abangayaziyo ngobukho bayo kodwa, ukusukela ngalo mzuzu, ndingakuxelela ukuba izalisekisa ngokugqibeleleyo injongo yayo kwangaxeshanye inikezela ngobuhle obucocekileyo kodwa ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwentando.
Njengokwesiko kulo lonke uphononongo esenzayo kwiActualidad Gadget, ngezantsi nje kwale migca ndikushiye nge ndice Ukuze ube nokuhamba ukhululeke ngakumbi ngakumbi kwaye ukhawuleze ngendlela eya kulawo macandelo ovavanyo anokuthi, ngasizathu sithile, abe nomdla ngakumbi okanye aphendule ngcono kwimibuzo yakho. Kwelinye icala, ndiyakukhuthaza ukuba usebenzise ibhokisi yezimvo kulo naluphi na uhlobo lwegalelo, ukwenzeka okanye umbuzo onokuba nawo osele uhleli kumbhobho.
1 Konke malunga ne-SPC, inkampani yaseSpain engaziwayo kuninzi
2 Nantsi indlela eboniswa ngayo i-SPC Glow 10.1
3 Imilinganiselo kunye neempawu zobugcisa
4 Ukuboniswa kunye nokukhethwa kwemultimedia
5 Inkqubo yokusebenza
Konke malunga ne-SPC, inkampani yaseSpain engaziwayo kuninzi
SPC Yiyo Inkampani yaseSpain Ezinikezelwe kwihlabathi le-elektroniki, inkampani ethi, ngaphandle kokungaziwa kubasebenzisi abaninzi, inyani kukuba isebenze kule marike ngaphezulu kweminyaka engama-20, into ebancedileyo ukuba bazi kakuhle ukuba yintoni abathengi babo bajonge, kweliphi icandelo lentengiso abafuna ukusebenza kwaye ngaphezulu kwako konke abanamava anokufezekiswa kuphela ngokusebenza nzima.
Konke oku kuguqulela kwinkampani ethi namhlanje inike ikhathalogu yemveliso enomdla kakhulu apho singenakufumana kuphela iipilisi ezinje nge-SPC Glow 10.1 esidibanisa namhlanje, kodwa nezinye iintlobo zezixhobo ezinje ngee-ebook, iifowuni, izinto zokunxiba, i-Android TV, iiWinbook. Kunye nokuqokelelwa okumangalisayo kwezixhobo onokuzisebenzisa kunye nayo nayiphi na imveliso yazo.
Nantsi indlela eboniswa ngayo i-SPC Glow 10.1
Nje ukuba uthathe isigqibo sokufumana i-SPC Glow 10.1, inyani kukuba uya kufumanisa, ubuncinci ngokwe ntetho ibhekisa, loo SPC uthathe unonophelo olukhulu kuzo zonke iinkalo efanayo, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo i-euro ezingaphezulu kwe-100 ezithe iipilisi ozibonayo kwiscreen zibiza.
Ngale nto engqondweni, inomdla okhethekileyo ukuba ibhokisi yoxande yokuphakama okuphantsi isetyenzisiwe apho sinokufumana khona, ngaphakathi, kwaye ngokuvula ibhokisi, ithebhulethi ikhuselekile ngokugqibeleleyo kwaye ikhuselekile kwikhava emnyama enophawu lweSPC embindini. Emva kokuphakamisa olu hlobo lwesigqubuthelo, uya kuba nakho ukufumana ezinye iintambo kunye nezixhobo zombini ukutshaja ibhetri efanayo neentambo i-USB ukudibanisa ithebhulethi nekhompyuter kunye I-USB-OTG ukudibanisa iintonga ze-USB, iikhamera ...
Iinkcukacha ezitsala umdla ngakumbi kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, ezikhumbuza ezinye iintlobo zeenkampani, ndiyifumene kwinto elula njengokuba, kunye nazo zonke ezi ntambo, kukho ibhola encinci yokucoca iscreen segrisi inokushiya iminwe yethu xa siyisebenzisa kunye nophawu lwe-SPC, incwadi encinci enemiyalelo yokusebenzisa kunye ne iseti yesitika kunye nelogo yenkampani.
Ngokubhekisele kwithebhulethi uqobo, ukuba i-SPC Glow 10.1 imele into ethile, ngokuchanekileyo kungenxa yoyilo apho yonke into esiyibonayo nesiyichukumisayo, ngaphandle kwescreen, yenziwe iplastiki. Ngaphandle koku kufuneka ndivume ukuba, Izinto zivakala zilungile Nokuba uthe krwaqu nje kungabonakala kurhabaxa okanye kungakhathali ngenxa yokubonakala kweplastiki uqobo. Into ethi, nangona inokubonakala imbi ekuqaleni, inyani kukuba iyasivumela, ngenxa yobulukhuni bayo, ukuze sikwazi ukushiya isixhobo ezandleni zincinci yendlu ngaphandle koloyiko lokuba singonakala.
Imilinganiselo kunye neempawu zobugcisa
Ngokubhekisele kubungakanani, kufuneka sithathele ingqalelo ukuba sijamelene ne-10,1-intshi yecwecwe, efuna ubukhulu bokugqibela X x 250 150 10 mm enobunzima be I-560 gram, into eguqulela kwithebhulethi enkulu, ngenxa yescreen sayo esikhulu esinokuba nzima kuxhomekeka ekubeni sithatha siphi isikhundla xa siyithatha.
Kwinqanaba lekhompyutha i-SPC Glow 10.1 ixhotyisiwe, ubuncinci kule nguqulo, ngefayile ye- Inkqubo ye-Quad-core AllWinner processor (ICortex A53) ekwaziyo ukusebenza rhoqo 1,34 IGz, ehamba ngamaxesha onke yiMali 400 MP2 GPU. Ngokubhekisele kwi-RAM, kuyakufuneka sihlawulise i-2 GB, oko kuthetha ukuba ukuba sisebenza kakhulu ngomsebenzi we-multitasking, ukusebenza kunokuwohloka kakhulu, nangona inyani kukuba ayisiyonto icace gca okanye ekhathazayo kwaye, kule ityala, ngenxa yenguqulo esiyivavanyayo, i-32 GB yediski enzima.
Kwelinye icala, asinakulibala ukukhankanya iinkcukacha ezinje nge Ikhamera engasemva eyi-2 megapixel kwaye ngaphambili uhlobo lwe-VGA, ibhetri engama-6.000 mAh ekwaziyo ukunikezela ukuya kuthi ga Iiyure ezingama-7 zokusebenza ekusebenziseni kakhulu okanye ukwandiswa kwememori yangaphakathi yemveliso ngokusebenzisa i-microSD, uqhagamshelo lwe-microUSB okanye i-microHDMI ehlala inomdla eya kuthi, phakathi kwezinye izinto, idibanise ithebhulethi, umzekelo, kumabonakude.
Okokugqibela, asinakho ukuyilibala into ebaluleke njengokunyaniseka, kwicandelo uqhagamshelo, i-SPC Glow 10.1 ineBluetooth, iWiFi kunye ne3G eya kuthi isenze sikwazi ukudibanisa ikhadi lefowuni kwaye sikwazi ukufowunela, ukuthumela iSMS kwithebhulethi uqobo okanye sikwazi ukufikelela kwi-intanethi ngenqanaba ledatha ngokungathi yi-smartphone .
Ukuboniswa kunye nokukhethwa kwemultimedia
Ngesi sihlandlo sinemodeli phambi kwethu exhotyiswe ngescreen se-intshi eyi-10,1 kwaye 1024 x 600 pixels Yintoni i Ubunzima be-159 dpi. Ngokwam, kufuneka ndivume ukuba, nangona sesinye sezona zikrini zibalaseleyo kwintengiso kweli candelo, inyani kukuba umgangatho kunye nokusebenza kwawo kuhle kakhulu.
Enye inkcukacha ebambe umdla wam, ubuncinci ngeentsuku zokuqala zokusetyenziswa, kukuba, ngenxa yeglasi engqindilili yescreen se-SPC Glow 10.1, into enokukwenza ukuba ucinge ukuba amava achanekile ngokuthe ngqo. Kwelinye icala, ukuxhotyiswa ngekristale engqindilili, ngokuqinisekileyo iyakuxhathisa ngcono kunalo naluphi na uhlobo lokuqhushumba okanye ukungahambi kakuhle, into ekufuneka siyithathele ingqalelo, ngakumbi ukuba siza kuyishiya ezandleni zincinci yendlu.
Malunga nenkqubo ye odiyo, inyaniso kukuba Elinye lawona manqaku athabathayo ukuba imodeli enje inokuba nayo, phakathi kwezinye izinto, kwinto yokuba ayinayo ivolumu ephezulu kakhulu ngaxeshanye ukuba, kuxhomekeke kwinto omamele yona, inokugqwetha. Iinkcukacha zoyilo ezingahambeliyo kanye yindawo esithethi kuyo, kanye ngasemva kwethebhulethi, ebangela ukuba, ngokuyishiya ishiyeke emqolo, amandla esithethi ancipha kakhulu.
Kweli candelo siza kuthetha ngenkqubo yokusebenza eziswa yi-SPC Glow 10.1 ngokungagqibekanga apho izibophelele ekufakweni kwe Android 6.0.1 kuhlobo olucocekileyo lwenkqubo, oko kukuthi, abafana abavela kwi-SPC bakhethe ngqo ukufaka i-Android ngaphandle kwesidingo, njengakwezinye iimveliso, ukwenza ngokwezifiso uguqulelo lwenkqubo yokusebenza kunye nokubheja ngokuchanekileyo kumtsalane kunye nomgangatho ngokusetyenziswa UGoogle uxhobise ngayo inkqubo yokusebenza.
Nangona kunjalo, kukho utshintsho xa kuthelekiswa nohlobo olusulungekileyo lwe-Android, umzekelo esinawo kufakelo olungagqibekanga lwezicelo ezininzi ezenziwe yinkampani uqobo. Okwangoku, inkcukacha endibambe ingqalelo yeyokuba, ukufaka esinye isicelo kuya kufuneka ubhenele ekukhupheleni iapap ukusukela, nangona sineVenkile yokuDlala, kukho iinkqubo ezithile, xa sizifaka, sizifumana a qaphela ukuba azihambelani. Sinomzekelo kwisicelo seNetflix, kwiVenkile yokuDlala awukwazi ukuyifaka ngokuthe ngqo nangona, ngokufikelela kwiwebhusayithi yenkampani bakunika ukhetho lokukhuphela iapap.
Ukukhanya kwe-SPC 10.1
Indawo yokudlala ayisebenzi nazo zonke izicelo
Isikrini sishinyene kakhulu
Ukuba ucinga ukuthenga ithebhulethi oza kuyisebenzisa kuphela ekusebenziseni umxholo wemultimedia, ukufikelela kwinethiwekhi yakho, jonga i-imeyile yakho kwaye udlale umdlalo ongaqhelekanga, ngaphandle kwamathandabuzo i-SPC Glow 10.1 inomlingani wakho ogqibeleleyo ekusebenzeni kwaye ngenxa yokuba iyathengiswa ngexabiso, khumbula ukuba iyathengiswa e Ixabiso elisemthethweni le-139 euro (ingxelo evavanyiweyo), zimbalwa kakhulu izimbangi ezikwaziyo ukutshatisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukukhanya kwe-SPC 10.1, ithebhulethi enomdla kakhulu kwezoqoqosho [UHLAZIYO]
Ndisandula ukuthenga ukukhanya kwe-spc 10.1 kwintombi yam, yonke into isebenza kakuhle ngokomgaqo, kodwa xa ndifaka isicelo seSnapchat umfanekiso wekhamera (ngaphambili nangasemva) ujika "ujonge ezantsi". Xa uvula ithebhulethi ukuzama ukuyilungisa, iyabuya ijongise phantsi, nokuba utshixa ukujikeleza kwescreen kuseto. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukusombulula le ngxaki? Nditsalele umnxeba inkonzo ye-SPC yezobuchwephesha kwaye bandixelele ukuba kufuneka ibe yinto ehambelana nayo, ukuze ndinxibelelane nabaqulunqi beSpapchat 🙁